Schoollọ akwụkwọ - Jiangsu Senwei Eletrọniki Co., Ltd.
Ulo akwukwo ikike nke ulo akwukwo University
campus otu kaadi sisitemu na ugwo oru nke onwe ya
Usoro njikwa ike ọgụgụ isi gụnyere ọnụ ọnụ igwe eletriki eletrik, ndị na-achịkọta data na ngwanrọ sistemụ PC. Ngwaọrụ eletriki eletriki bụ ọkọlọtọ ume ike ma ọ bụ mita eletriki ike nwere ihe RS485. Ngwaọrụ nakọkọtara na-ahụ maka ịnakọta data mita eletrik. Ngwaọrụ nchịkọta ọ bụla nwere ike iburu mita eletrik 128. Ngwaọrụ nakọ data nwere RS485, TCP / IP network network. A na-eji ngwanrọ sistemụ PC iji na-anakọta data na nyocha nke ndekọ.
Enwere ọtụtụ ụzọ elekere eletrik eletriki eletrik: mita eletriki ike na interface RS485, yana ngosipụta kristal mmiri, mita abụọ smart, na mita elekere elekere anọ. Mita eletriki eletriki eletriki nwere ihe ngosi ihe ngosi kristal nwere ike igosiputa ike ike zuru oke, ike ejiri ya na ikike fọdụrụnụ, bụ nke ejiri rụọ ọrụ maka ekesa nkesa; a na-ejikarị mita eletrik maka ọnọdụ nrụnye buru ibu, gbakwunyere ọkwa ụlọ ọrụ nhazi nke obere, nke nwere ọtụtụ ọdịda na mmezi siri ike.
Mita ahụ na-abịa na CPU, nke na-arụ ọrụ niile na-achịkwa ike. Ọ dị mfe ịwụnye ma dị mfe ilekọta. Ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke akụrụngwa njikwa ike ụlọ nke ụlọ akwụkwọ na - anọchi ụlọ ọrụ nchịkwa akara mbụ.
Na mgbakwunye na iji nweta njikwa na njikwa ya, usoro nchịkwa eletriki nwere ọgụgụ isi nwekwara ike jikọtara ya na sistemụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ site na nyocha iji hụ na ịkwụ ụgwọ ọrụ nke ụmụ akwụkwọ, ezigbo oge nlele nke etiti kaadị, iji nweta enweghị elele. na nchekwa na arụmọrụ nchekwa nke sistemụ elektrọnik. Ihe omume a kachasi mkpa maka nnakọta nke etiti na ntinye nke ngbanye ọkụ eletrik n'ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọrụ. A na-eji ọnọdụ nkwukọrịta RS485 n'ime ụlọ ahụ, a na-eji TCP / IP mee ihe maka nkwukọrịta dịpụrụ adịpụ n'etiti ụlọ ndị ahụ.
(1) Mbido onye ọrụ na njikwa akụrụngwa
———Nchita ime ụlọ (nọmba ụlọ na ebe ọnọdụ dị ka ala na ụlọ ahụ, ọnụọgụ nke ndị bi na ya na ozi nkọwa kwekọrọ, tarifu na ozi pụrụ iche)
——Mbe ntọala tempụ (ozi n'etiti nọmba mita ugbu a na ọnọdụ nọmba, na ozi onye ọrụ)
——Data ọnụ ụzọ ámá (debe ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ ụlọ na mita dị n'okpuru ikike ya, ọnọdụ ọnụ ụzọ na ịkpọ aha, wdg)
(2) Mita na elele eletrik
——Hinye mgbawa larịị batara (nzipụta ziri ezi (1.0 larịị), ma wepụta pịkọl ike dị iche iche n'otu oge)
——- Igwe eletriki a kwụrụ ụgwọ, mmechi anaghị akwụ ụgwọ (ego anaghị echetara gị, enwere ike ịtọ oke ịfefe ego site na sọftụwia)
——- Ncheta ncheta tupu oge eruo (mkpanaka SMS, ihe ngosipụta nke LED, njirisi WEB)
——Bekọtara ọnụ, bipụta akwụkwọ (nzipu ego na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-edebe ego)
————-Pate nlele na-ahụ maka inyeghachi ego (ego na ego na ego, ego nkọwa ego)
——Kwụ -gwọ Onwe Gị (iji nweta njikọ na enweghị nkwekọ na sistemụ kaadi klọt na ụgwọ ọkụ eletrik)
(3) Nhazi nhazi na Otu Ibu Ibu
— —Gwanrọ a nwere ike ịrụ ọrụ ntọala dị iche iche dịka ike na njikwa / gbanyụọ, oke ibu, wdg ma nyefee ma chekwaa ya na ọdụ ụgbọ ala ahụ. N'okpuru arụmọrụ na-apụ apụ, mita ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nchịkwa dị iche iche nke sọftụwia na-akpaghị aka
——Sịnụ gbanye ọkụ ma gbanyụọ oge ọ bụla
——- A ga-atụnye ike ibu ibu n'enweghị ike, ọ ga-agbanyụ ya ozugbo agafere ókè a
———- Ike ibu ibu dị egwu nwere ike ihie, gbochie ọkụ
——Ghọta usoro iwu mgbochi nke mgbochi egbochi site na iji teknụzụ wepụ ihe egwu nwere ike ịdakwasị gị
———Adị ngwa mgbake ozugbo ike gwụsịrị, enwere ike ịtọ oge mgbake na nkeji 0-255, 0 pụtara enweghị mgbake
(4) Nyochaa ọkwa na njikwa data
——Ekwusiri ọkwa nlezianya (nyochaa ezigbo oge ọnụọgụ ntanetị yana ọnọdụ mpịakọta nke mita ahụ, ọkwa ọnlaịnụ na mpi ụzọ, wdg.)
————- monitoringle ọnọdụ ọnọdụ (ileba anya ugbua n'ime ụlọ, voltaji, njikwa eletrik dị mma, wdg)
——Patus na ndekọ (ezigbo nleba anya maka ọnọdụ mgbanwe, ike ozugbo, wdg maka nlekọta dị mma)
——Ihe ike na ike oriri (site na ngosipụta na netwọọkụ WEB)
—— —Mgbe ike dịkarịsịrị ike (ọ bụrụ na ọ karịrị, ọnụahịa ya ga-ana ya)
——Bịghachite nlekọta nkwụghachi (a ga-akwụghachi ụmụ akwụkwọ nkwụghachi na oge ebugharị ma ọ bụ ngụsị akwụkwọ, a ga-akpụzite mkpesa na-akpaghị aka)
——Rọgharịa maka mgbanwe maka data (dịka ọmụmaatụ, maka ime ụlọ, mgbanwe data site na ntọala ngwanrọ)
——Anyocha ndekọ banyere ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme (kwa ọnwa, kwa ọnwa, na nyocha afọ nke ike ọkụ, mmebi, wdg)
——- Enwere ike ịtọ tarifu dị iche iche (edobere ọnụahịa otu dị iche iche dị ka njirimara ndị ụlọ ọrụ dị iche iche si dị)
(5) Sistemụ Njikwa na Nchedo Data
——Shutdown akara ọdịda ọdịda (ijikwa kọmputa elele iji gosipụta akara ngosi ụfọdụ)
———- Usoro njikwa nchọpụta njehie (nyochaa kọmputa nyocha iji gosipụta akara ngosi ụfọdụ)
Na ọrụ izu ohi
—Nyocha nleba anya oge
——Obere ụlọ ọrụ B / S (enwere ike iji ya rụọ ọrụ, jikwaa ya, jụọ ya, wdg.)
——Anyị enweghị njikọ na sistemụ kaadị (ịmara ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ, ikike ịzụta onwe ya)
——Data nchekwa n'oge usoro sistemụ ike (bụrụ nke ike gwụrụ ma ọ bụ ọdịda kọmputa, mita na onye nakọtara na-echekwa data na akpaghị aka iji jide n'aka na ọ gaghị efu afọ 10)
——Haala ndabere data (dakọtara na usoro ndabere na usoro dị iche iche iji hụ na nchekwa data)
——Ochịkọta, paswọọdụ nchịkwa, nhazi ọkwa (njirimara dị iche iche nwere ndị ọchịchị dị iche iche, okwuntughe dị iche iche, nchekwa na nzuzo, na nhazi nke ọma)
Mita e ji mara ya
(1) Mmesho nke ike na-arụ ọrụ.
(2) Ihe ndị bụ isi mepụtara akụkụ pụrụ iche dị elu.
(3) Ngosipụta LCD nwere akụkụ ya sara mbara yana ọdịiche dị elu nwere ike igosipụta: ike fọdụrụ, ike zuru oke, ike azụtara. ọ dịịrị ụmụ akwụkwọ mfe ịlele ike oriri
(4) Site na ọrụ ntụle nke voltaji, ugbu a, ike, ike na ihe ndị ọzọ.
(5) Mita ahụ n'onwe ya nwere ọrụ nchekwa data. Mgbe gị na kọmịị njikwa na-akparịta ụka, ọ na-ebupute data nnakọta ike ozugbo; na-akwado usoro nkwukọrịta RS-485.
(6) Iji ọrụ kalịnda na elekere, n'ime awa asatọ, ị nwere ike ịhazi oge asatọ iji chịkwaa ike
(7) Mita eletriki nwere ike ịrụ ọrụ na nkeonwe ma nwee njirimara ọrụ nke ibu arụ ma na-enye nkwa dị mma maka igbochi ihe egwu nwere ike ịdakwasị ya.
(8) Were DIN Rail nwụnye, pere mpe ma dịkwa mfe ịwụnye.
Nka na ụzụ:
Refere ọkụ 220V
Nkọwapụta ugbu a 5(20),10（40)A
Izi ezi Ọkwa nọ n'ọrụ 1
Ike oriri Ahịrị voltaji: <= 1.5W, 10VA; ahịrị ugbu a: <2VA
Odi okpomoku -25 ~ 60degree
Mita Constant (imp / kWh) 3200
Oke iru mmiri ≤85%
Esdị Njikọ Waya